ထို့ကြောင့် Deadpool ယခုများအတွက် MCU အတွက်နေရာမရှိရှိပါတယ် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "Deadpool ယခုများအတွက် MCU အတွက်နေရာမရှိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့် - BGR
Tele RELAY တစ်ခု9စက်တင်ဘာလ 2019
Deadpool, X-Men နှင့် Fantastic Four အပါအဝင်ဖွယ်ရှိလာမယ့်နှစ်အတွင်း MCU သို့မိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုအံ့ဩခြင်းဇာတ်ကောင်ဘဏ္ဍာကို၏ဒစ္စနေးရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် Fox ကများ၏ဝယ်ယူ။ အံ့ဩခြင်း X-Men နှင့် Fantastic Four နှင့် ပတ်သက်. ခြစ်ရာကနေဖွယ်ရှိသည်နေစဉ်, အတိတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှလျစ်လျူရှု, Deadpool မပြောင်းလဲရှိနေပါဦးမည်။ ရိုင်ယန် Reynolds ကတစ်ဇာတ်ကောင်ကစားရန်ဆက်လက်မည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကောင်းယခင်ရုပ်ရှင်ကားအတွက်ထက်တူညီတဲ့အနက်ရောင်စူပါဟီးရိုးစွမ်းဆောင်ရည်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Deadpool အဆိုပါ MCU နှင့် Avengers ကြားတွင်မိမိနေရာမှယူကာကွယ်ပေးသည်သောအစောပိုင်းကရုပ်ရှင်ကားများထဲမှနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပြဿနာလည်းမရှိ။
သငျသညျပြီးသားရှိသမျှကိုမြင်ရပါတယ် အကယ်. Deadpool et Avengers သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားကအဘယ်အရာကိုသံသယ - ကတကယ်တော့, အံ့ဩခြင်း၏အမှားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Reddit အသုံးပြုသူ Joonicks MCUs များ၏အခြေအနေတွင် Deadpool မှားခဲ့သမျှကိုရှင်းပြဖို့သာအနည်းငယ်စာကြောင်းများလိုအပ်:
ကြေးနန်း Teddy တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအချိန်ဇယားခဲ့ပေမယ့် Deadpool ၏လုပ်ရပ်များတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဖြစ် Deadpool2အဓိကဝဠာကို MCU အတူပုံကိုက်ညီမှုအချိန်တစ်ခရီးစဉ်ပါဝင်ပတ်သက်။ ထိုသို့သောဆိုးကျိုးများအတိအလင်း Avengers ထဲမှာပယ်ချခဲ့ကြသည်: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ။ ထို့ကြောင့် Deadpool ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအလျောက်ဥပဒေများ, မယ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအဖြစ်မှန်၌တည်ရှိ၏။
၏အရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်ဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ sur Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ အချိန်ခရီးသွားမှလေးစားမှု။ အံ့ဩခြင်းသင်သည်သင်၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့်သင့်အနာဂတ်အားပြောင်းလဲသင့်ရဲ့အတိတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုသည်အဘယ်သူသည်အချိန်ခရီးသွားအကြောင်းကိုရှိသမျှသည်အခြားသောရုပ်ရှင်ကျီစယ်, ပိုမိုလက်တွေ့ကျကျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ Fingame ၏အချိန်ခရီးသွား ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး ပြန်အနာဂတ် ရုပ်ရှင်များတွင်ပါမောက္ခရှိသွားပြီအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ Deadpool2မှာစတင်မိတ်ဆက်ကြောင်းအဖြစ်ခရီးသွား၏တူညီသောအယူအဆကိုအသုံးပြုသည် ။ ပြန်အနာဂတ် .
လူအများစုဤကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုခြင်းဖြင့်နှောင့်အယှက်ကြသည်မဟုတ်သော်လည်း, သူတို့သည်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ MCU များအတွက်ဆက်လက်၏ကြီးမားသောပြဿနာ Deadpool တစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ကြိမ်။ ဒါကြောင့်အံ့ဩခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ Deadpool2အဆိုပါ MCU အဖြစ်မှန် fit ရန်။ ဒီတစ်ခါလည်း Wade Wilson ကအရာအားလုံးကိုစိတ်ကူး? Cable ကိုဒါ Thanos ကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်အဘယ်ကြောင့်အချိန်ခရီးသွားပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီစရှင်းပြသည်။
သူကပြောပါတယ်, ဘာမျှမအံ့ဩခြင်းအဆင့်4များအတွက် Deadpool နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမကြေငြာထားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် Deadpool, အ MCU မှယူဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါကပြောပါတယ်။
BGR - အရာအားလုံးယခုအပတ်ဖြစ်ပြီးကျန် (စက်တင်ဘာလ 8 ၏အပတ်က) Netflix နဲ့မှအသစ်ဖြစ်၏